Birmingham 4 Ibhedi 4 En-suite House-Indawo yokupaka yasimahla
Ifanelene ngokufanelekileyo abantu abashishinayo nabarhwebi. Kutshanje kuhlaziywe indlu enamagumbi amane okulala amabini aneendawo ezintle zeen-suite ezifumaneka kuwo onke amagumbi kunye nokupakishwa kweemoto simahla kwiimoto ezi-4. Kukho ikhitshi entsha yosapho kunye negumbi lokuhlala elinebhedi yeSofa kunye negumbi lokuhlambela lesi-5. Indlu ikwindawo yokuhlala ezolileyo yaseBirmingham, iikhilomitha ezi-4 kuphela ukusuka eB1. Ufikelelo olukhulu kwiZiko leSixeko. Le ndlu intle ibonelela ngokufikelela ngokulula kwi-M42/M40 (5mins), M5(10mins) & M6 (15mins) iindlela zemoto.
Le ndawo yokuhlala imangalisayo ibonelela ngendawo yokuhlala yabucala ekhululekileyo yokusetyenziswa kweshishini kunye neentsapho. Onke amagumbi anezixhobo ezitsha zabucala zeen-suite; ifakwe iithayile ngokupheleleyo (iPorcelanosa), enezindlu zangasese ezijinga eludongeni & neeyunithi ezingamampunge (kwizifakelo zaseSwitzerland), iityhubhile zeshawara ezineeshawa zaseGrohe. Ilinen entsha yokuhlambela kunye ne-assortment yeprimiyamu yeshampu kunye nejeli yeshawa ibonelelwe kwi-en-suite nganye.
Ikhitshi elitsha kraca, elixhotyiswe ngokupheleleyo linendawo yokupheka usapho olukhulu/izidlo zeqela. Kukho ukhetho oluncomekayo lweeti kunye neekofu. Ngaphandle kwekhitshi kukho indawo yokuhlamba impahla, kubandakanya umatshini wokuhlamba, isomisi, ibhodi yoku-ayina kunye ne-ayini.
Amagumbi okulala asandula ukuhlaziywa kwaye anemigangatho ekhaphethi, iifestile ezinkulu ezikhazimle kabini, iibhedi eziphindwe kabini ezinelinen entsha kunye nemiqamelo eyongezelelweyo, i-wardrobe kunye nesifuba sedrowa. Izixhobo zokwenza iti, phantsi kwekhabhathi yesikhenkcezisi kunye neendawo zokufudumeza ukutya nazo ziyafumaneka kwigumbi ngalinye, ezinokuba luncedo kwirenti ekwabelwana ngayo ngamashishini okanye ukubhukisha usapho olukhulu.
Igumbi lokuhlala / igumbi lokutyela linebhedi etofo-sofa, iTV enescreen esicaba kunye netafile yokutyela enomgangatho ukuya kwiifestile zesilingi ezibandakanya umnyango obonelela ngokungena kwigadi yabucala kunye negadi yangasemva ekhuselweyo.
Indawo yokuhlala ikwindawo ezolileyo eneepaki ezininzi ngaphakathi kwemizuzu embalwa yokuhamba. Ibekwe ngokufanelekileyo kufutshane neBirmingham Canal, ekhokelela kuyo yonke indlela eya kwiZiko leSixeko saseBirmingham, uhamba ngeCannon Hill Park endleleni.
Usoloko efumaneka ngoncedo neengcebiso